အခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Huawei ဂီတကိုမည်သို့တပ်ဆင်။ အသုံးပြုမည်နည်း Androidsis
အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Huawei ဂီတကိုမည်သို့တပ်ဆင်။ အသုံးပြုရမည်နည်း
Francisco Ruiz | | Android application များ, အခမဲ့ဂီတ, Android cheat, လဲ tutorial
ခင်ဗျားတို့အများစုကမင်းကိုဘယ်လိုပြောဖို့ငါ့ကိုတောင်းဆိုနေကြတာလဲ Android မှာအခမဲ့တေးဂီတကိုရယူပါယနေ့ငါလုပ်ချင်တယ် လက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအပြည့်အစုံကိုကျွန်ုပ်ပြသထားသောဟွာဝေ၏ဆလင်ဒါများ၏ရိုးရှင်းသောဂီတလျှောက်လွှာကိုပြသခဲ့သည် တရုတ်ပိုင်နက်ထဲမှာရောင်း။ apk ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းမှသင်ခန်းစာအပြည့်အစုံကိုသင်ပေးသည်။ ၎င်းသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Play စတိုးတွင်တရားဝင်ရှာ။ မရနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည် Huawei ဆိပ်ကမ်းများ၌ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့်တိုင်အထိတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်းကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်းနှင့်သီချင်းများဒေါင်းလုပ်သည်လုံးဝအတွက်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုရွေးချယ်ခြင်းပင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည် တေးဂီတအခမဲ့.
မသိသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွင်မျှဝေထားသောဟွာဝေဂီတဖွင့်စက်နှင့်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့်မည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်ပေးသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်နယ်မြေအတွင်းရောင်းချသောဆိပ်ကမ်းများအတွက်မူလ Huawei ကစားသမားဖြစ်သည်၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးအထူးသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများပါဝင်သည်သောမူရင်းကစားသမား ဂီတကို streaming ဖြင့်နားထောင်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုမလိုဘဲနှင့် Android အတွက်မည်သည့်ဂီတဖွင့်စက်မှမဆို၎င်းကိုနားထောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုသင်သိပြီ။ အခမဲ့ Huawei ပါ ၀ င်သည့် Huawei မူရင်းဂီတဖွင့်စက်မှသင်ရွေးချယ်သောအရာအားလုံးကိုသင်နှစ်သက်လိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်ဒီဗွီဒီယို၏အစမှာသင့်ကိုချန်ထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုကိုမလွတ်သင့်ပါ။ post ။
1 အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Huawei ဂီတကိုမည်သို့တပ်ဆင်။ အသုံးပြုရမည်နည်း
1.1 1º APK ဖိုင်ကိုကူးယူပါ
1.2 ၂။ သင်၏ဒေသတွင်းဂီတ၊ အသံလွှင့်ချက်ရှိဂီတများကိုနားထောင်ရန်သို့မဟုတ်အခမဲ့သီချင်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါ
1º APK ဖိုင်ကိုကူးယူပါ
ငါတို့ခံစားချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုခံစားချင်ရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် အခမဲ့ဂီတဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Huawei ဂီတဖွင့်စက်၎င်း၏ ဒီတူညီတဲ့ link ကနေ apk ကို download လုပ်ပါ.
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဤနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို download ပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် နောက်ပိုင်းဗားရှင်းများသည် streaming ဂီတကိုနားထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခမဲ့သီချင်းများကူးယူခြင်းများအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
apk ကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့် application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်တပ်ဆင်ရန်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည် Android ဗားရှင်း ၄.၀ သို့မဟုတ်အထက်တွင်ရှိရမည် ကနေ enabled ဘဲလျက်အပြင်၌ ဆက်တင်များ / လုံခြုံရေး, ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုထို option ကို မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ပါ သို့မဟုတ်အမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်။
ဤအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏ဂီတဖွင့်စက်ကိုစတင်နိူင်သည်။ သင်မူရင်းအတည်ပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည် အင်္ဂလိပ်လိုသာရနိုင်သည် အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်သုံးစွဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
၂။ သင်၏ဒေသတွင်းဂီတ၊ အသံလွှင့်ချက်ရှိဂီတများကိုနားထောင်ရန်သို့မဟုတ်အခမဲ့သီချင်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါ
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာမူရင်းအားဖြင့်တေးဂီတဖွင့်စက်ကိုရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကိုငါပြသည် Huawei အကောင့်တစ်ခုနှင့် VPN ဆက်သွယ်မှုလည်းမလိုအပ်ပါ.
၎င်းသည်ဤအရာအားလုံးအတွက်နှင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသော configuration options များ၊ ကြီးမားသောဂီတစာကြည့်တိုက်၊ ကြီးမားသောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်စသည်တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ Huawei ဂီတဖွင့်စက်သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Huawei ဂီတကိုမည်သို့တပ်ဆင်။ အသုံးပြုရမည်နည်း
Rojas Abel ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Moto G2 မှာကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
Rojas Abel အားပြန်ပြောပါ
Juan Hartmann Serrano ဟုသူကပြောသည်
Juan Hartmann Serrano အားပြန်ပြောပါ
Jorge Garrido Panizo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ xiaomi RedMi Note3Pro တွင် VPN သည်မည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းမျှအလုပ်မလုပ်ပါ။
Jorge Garrido Panizo အားပြန်ပြောပါ
၎င်းသည် matte9တွင် apk ကိုမဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည်ပျက်စီးနေသော application package ၏ message ကိုထည့်ပေးသည်။ ထိုအခါငါပြင်ပ applications များ install လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
ဟဲလို - ခင်ဗျားအိမ်ထောင်ဖက် ၉ ရက်နေ့မှာ APUS MUSIC HUAWEI ကို install လုပ်နိုင်မလား။ ငါအတူတူပင်ပြPROနာနှင့်အတူဖြစ်၏
Francisco Ramirez Vico ဟုသူကပြောသည်
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီအပလီကေးရှင်းကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂီတပညာရှင်ကို SD ထဲကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့မရဘူးလား။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထံဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရ၊
Francisco Ramírez Vico ကိုပြန်ပြောပါ
သံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံး app ကို !!
မည်မျှပင်နားထောင်သည်ဖြစ်စေအကြိုက်ဆုံးဂီတကိုမည်သူမျှမ download လိုပါ။ ဘာသာစကားအတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်သည့်အလွန်အလိုလိုသိသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။ ဖြည့်စွက် !!! ၎င်းကိုတင် လိုက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို spotify Premium ၏သွေးဆောင်မှုကိုမခံခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အယ်လ်ဘမ်များရှိပါက၎င်းကိုတိုးတက်စေမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
Eyhbar ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါ link ကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒီဇင်ဘာလ update ကိုရှိသေးသလား, ဒါမှမဟုတ်သြဂုတ်လ 1 ၏ပိုကောင်းနေဆဲလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်နိုင်သူများအတွက်… Fixed …။
သီချင်းသည်ဖုန်း၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်သီချင်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်သာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ (SD ကဒ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ) ။
၎င်းကိုသင်တပ်ဆင်ပြီးပြီဆိုပါကသီချင်းများကို SD ကဒ်သို့ကူးယူပါ။ သင်လုပ်ရမှာက application ကို uninstall လုပ်ပြီး internal memory ထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ folder အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။
ထို့နောက်သင် application ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုမကူးယူမီ“ settings” ကိုသွားပြီးသီချင်းများကို internal memory ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်ဟုပြောရမည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei P10 Lite ရှိသည်။ ကျွန်ုပ် application ကိုတပ်ဆင်လိုသောအခါ၎င်းသည်ဖြေရှင်းချက်အချို့ပျက်စီးသွားသည်ဟုဆိုပါသည်။
ဒီမှာအသုံးပြုသူများစွာကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်ုပ်၏ P9 Lite တွင်တပ်ဆင်ရန်အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။ ပျက်စီးနေသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုအကြိမ်များစွာဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတုန်းပင်၊ ရလဒ်မှာအတူတူပင်။
subjeiris melendez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ p10 အရကျွန်ုပ်နှင့်ထပ်တူထပ်တူဖြစ်ပျက်မှုသည်၎င်းနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်မူလလျှောက်လွှာကို install လုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းကို install လုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ အဆိုးဆုံးမှာ၎င်းကိုသာမန်နည်းလမ်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်။ မရပါ။ cache နှင့် memory ကိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့် ... တစ်စုံတစ် ဦး မှဖြေရှင်းချက်ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေပါ
subjeiris melendez အားပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့သောခုနစ်ရက်ကကျွန်ုပ်သည်ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပြီး၎င်းဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မလုပ်နိုင်ပါ။ အပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။ အထုပ်ပျက်နေပုံရသည် သငျသညျအကြှနျုပျကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီနိုင်လျှင်ငါကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်
ငါတရုတ် Huawei အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကို install လုပ်သောအခါ၎င်းသည်ပျက်စီးသွားပြီးမထည့်သွင်းကြောင်းပြောပြသည်။
nougat တွင် application ကိုထည့်သွင်းလိုသောအခါ၎င်းသည်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောဖိုင်တစ်ခုအနေဖြင့်တွေ့ရပြီး၎င်းကို marshmallows တွင်သာတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ပြisနာကကျွန်ုပ်သည်ဤအပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းနှင့်တေးဂီတကိုနားထောင်နိုင်ခြင်းဆိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၎င်းသည်မကြားရတော့ပါ။ ဖျက်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်မှာ ၁၆ ဂရမ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်တေးဂီတကိုအမှန်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ပျက်စီးနေသော apk သည်ဤကဲ့သို့သောမဟုတ်ပါ၊ စနစ်နှင့်ပါ ၀ င်သည့်ဂီတဗားရှင်းကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည် root ရှိမှသာပြုလုပ်နိုင်သည်။
Samsug Galaxy S8 ကိုAprilပြီလတွင်ရောင်းချမည်
ယိုစိမ့်သော "concept" သည် Nokia C1 ကိုပြသသည်